Igbo, John: Lesson 062 - Agwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike (Jọn 9:1-12) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 062 (Healing on the Sabbath)
a) Agwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike (Jọn 9:1-12)
1 Mb͕e Ọ nāgabiga, O we hu otù nwoke kpuru ìsì malite n'oge amuru ya. 2 Ndi nēso uzọ-Ya we jua ya, si, Rabai, ònye mehiere, nwoke a ma-ọbu ndi muru ya, na amuru ya n'ìsì? 3 Jisus zara, si, Nwoke a emehieghi kwa, kama, ka ewe me ka ọlu-Ya puta ìhè nime Ya. 4 Aghaghi m ịrụ ọrụ nke onye zitere m, ebe ọ bụ n'ụbọchị. Oge na-abịa, mgbe ọ na-enweghị onye na-arụ ọrụ. 5 Mgbe m nọ n'ụwa, abụ m ìhè nke ụwa."
Jizos emeghi ngwa ngwa gbapu n'aka ndi iro ya ndi choro itu ya nkume, kama o huru na nwoke a nime nsogbu. Ọ bụ ịhụnanya na-agbaghara, kwesịrị ntụkwasị obi, jupụtakwa ngọzi. Ndị na-eso ụzọ ahụ hụkwara nwoke ahụ kpuru ìsì, ma ha enweghị nsogbu. Kama nke a, ha kwuru banyere obi amamikpe ahụ kpatara ọdachi a, dị ka ọtụtụ ndị n'oge gara aga chere na ọrịa nwere n'ihi mmehie ma ọ bụ ihe ọzọ ma daa dịka ntaramahụhụ si n'aka Chineke. Jisos ekwughị ihe kpatara nsogbu ahụ; ọ gwaghị ndị nne na nna ma ọ bụ nwa okorobịa ahụ na-emeghị ihe ọjọọ ma hụ na nsogbu nwoke a nwere ohere maka Chineke ịrụ ọrụ. Ọ gaghị ekwe ka ndị na-eso ụzọ ya kpee onye ìsì ahụ ma ọ bụ ajụjụ ajụjụ kpatara ihe ìsì. Ọ kpaliri ha ịga n'ihu wee gosi ha nzube nke uche Chineke; nzọpụta na ọgwụgwọ.
"Aghaghị m ịrụ ọrụ," ka Jizọs kwuru. Ịhụnanya kpaliri ya n'ihi na ọ chọghị ikpe ikpe ma ọ bụ ibibi kama ọ na-agụ agụụ ịgwọ ọrịa. Ọ na-egosi otú ịhụnanya ya si agbapụta, nkwenye ya na ebumnuche ya. Ọ bụ onye nzọpụta nke ụwa na-achọ ịme ndị mmadụ ndụ Chineke.
Anyị na-anụkwa okwu Jizọs, sị, "Adịghị m arụ ọrụ n'aha m ma ọ bụ site n'ike nke m: kama m na-arụ ọrụ Nna m n'aha Ya, dịka Ya." Ọrụ ya ọ kpọrọ Chineke.
Jizọs maara na oge dị mkpụmkpụ ma ọnwụ dị nso. N'agbanyeghị nke a, o nyere oge iji gwọọ nwoke kpuru ìsì. Ọ bụ ìhè nke ụwa na-achọ ịmụrụ onye ìsì ahụ ìhè na ìhè nke ndụ. E nwere oge na-abịa mgbe ya na onye nsọ ọ bụla nwere ike ime ihe. Ọ bụ ụbọchị na e nwere oge ikwusa ozi ọma ka anyị gbaara ya àmà. Ọchịchịrị na-abawanye, ụwa anyị enweghị olileanya ọzọ ma ọ bụghị nloghachi nke Kraịst. Ònye ga-akwadebe ụzọ ya?
6 Mgbe o kwusiri nke a, ọ na-afụ ala n'ala, jiri ụrọ ahụ kpụọ ájá, jiri ájá ahụ tee anya nwoke ahụ kpuru ìsì, 7 wee sị ya, "Laa, saa mmiri na ọdọ mmiri Siloam" (nke pụtara "Zitere"). N'ihi ya, ọ gara, saa ahụ, ma hụghachi ya.
N'oge gara aga, Jizọs rụrụ ọrụ ebube ya site n'okwu ọnụ. Ma n'okwu a banyere nwoke kpuru ìsì, ọ na-atụgharị n'elu ala ma mee otu mpempe na ncha ma kpuchie anya nwoke kpuru ìsì. Jizos cho ro ka o chee na nwoke ah kpuru ìsì ah nyere ihe site n'I ri Kraist. Jizọs nwere ọmịiko maka nwoke ahụ kpuru ìsì ma mesoo ya n'ụzọ kasị mma iji duru ya gaa gwọọ ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ dịghị anya e meghee anya nwoke ahụ. O ghaghariri uzo di na ndagwurugwu ahu, ka o saa onwe ya n'osisi miri Siloam, nke putara "onye ezitere", ihe negosi na ihe ojoro bu ihe eziputara ndi ya. Ha onwe ha bu ndi amuru n'ime nmehie na njehie ndi choro inweta ngwọta nke Jisos nyere na nzoputa.
Onye ìsì ahụ nakweere nkwa Kraịst, nwee obi ike n'ịhụnanya ya. O rubere isi n'otu ntabi anya. O jere ije nwayọ, na-eche n'obi ya ihe Kraist gwara ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gara, saa anya ya ma gwọọ ya. Ozugbo ahụ, ọ hụrụ ndị mmadụ, mmiri, ìhè, aka ya na mbara igwe. Enye ama okụt kpukpru emi ke idem. Olu ya gbawara na Hallelujah ma too maka ebere Chineke.
8 Ya mere ndi-ab͕ata-obi-ya na ndi huru ya na ọ kpuru ìsì n'oge gara aga, si, Onye a abughi Onye ahu Nke nọduru ala, nāriọ Ya? 9 Ndi ọzọ nāsi, Ọ bu ya. Ndị ọzọ na-asị, "Ọ dị ka ya." Ọ sịrị, "Abụ m ya." 10 Ya mere, ha na-ajụ ya, '' Olee otú meghee anya gị? 11 Ọ zara, "A nwoke na-akpọ Jizọs gwọrọ ájá, e tere mmanụ anya m, sị m, Gaa n'ọdọ mmiri Silom, na asa. N'ihi ya, m gara gaa saa anya, m wee hụ ụzọ. "Ha wee jụọ ya, sị," Olee ebe ọ nọ? "Ọ sịrị," Amaghị m."
Ebubeghi ọrụ ebube ahụ n'ihi na ndị agbata obi ya hụrụ onye a gwọrọ, ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu. Ụfọdụ ekweghị na onye na-eje ije ziri ezi bụ otu nwoke ahụ nke na-asụ ngọngọ ma na-ala azụ ka ọ na-aga, nke onye na-esote ya na-edukarị. Ọ gbara akaebe na ya onwe ya bụ otu onye ha maara.
Ndị mmadụ jụrụ ajụjụ banyere ọgwụgwọ ya, ma ha ajụghị banyere agwọ ọrịa, mana naanị otu esi eme ya. Onye kpuru ìsì ahụ weghachiri eweghachi kpọrọ onye na-agwọ ọrịa Jizọs, ọ maghị ihe ọzọ banyere ya. O amaghi chi chi nke Kraist mana o huru na ya bu nwoke nke kpoghariri ya ma debe ya n'anya ya, wee nye ya iwu ka o saa, ya mere o puru ihu.
Na nke a, ndị nledo nke Council gwara, sị, "Ebee ka Jizọs a nọ?" Nwa okorobịa ahụ zara, sị, "Amaghị m, mgbe m kpuru ìsì ma ugbu a, m na-ahụ, ọ rịọghị m maka ego ma ọ bụ okwu ekele. M gbadara na mmiri ahụ, ugbu a enwere m ike ịhụ. onye ọ bụ, ma ọ bụ ebe."
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jizọs; i wepughi nwoke kpuru ìsì ma leghara ya anya. I meghere anya ya wee mee ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nye ndị niile a mụrụ na mmehie. Wepu anya ayi site na Mo Nso gi ka anyi we hu ìhè gi, kwuputa aha gi n'olu.
Gịnị mere Jizọs ji gwọọ nwoke ahụ kpuru ìsì?